DowladdaXukuumada Saliibiga Kenya oo Diiday in ay Dowladda Ridada ah Ku wareejiso Maleeshiyaad dhawaan lagu tababaray gudaha dalkeeda. | Halganka Online
DowladdaXukuumada Saliibiga Kenya oo Diiday in ay Dowladda Ridada ah Ku wareejiso Maleeshiyaad dhawaan lagu tababaray gudaha dalkeeda.
Khilaafkii u dhexeeyay Dowlada KMG ah iyo Kenya ayaa cirka iskusii shareeray kadib markii Kenya ay si cad u sheegtay in aanay DKMG ah ku wareejin karin Maleeshiyaad dhawaan Tababaro ugusoo dhamaadeen dalka Kenya.
Madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa shaaciyay in Dowladiisu ay qaadan waysay codsi dhawaan uga yimid Shariif Sheykh Axmed oo ka codsaday dowlada Kenya in ay ku wareejiso kumanaan Ciidan ah oo bilihii lasoo dhaafay lagu tababarayay gudaha dalka Kenya.
Kibaki wuxuu muujiyay walaac dhanka amaanka ah oo uu dalkiisu wajahi karo hadii ay Kenya ciidamo ladagaalama Shabaab u dirto magaalada Muqdisho ama gobalada Jubbooyinka.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegay in Kenya aysan diri doonin kumanaan Askar ah oo dowlada KMG ah loogu tababaray gudahay Kenya balse wuxuu muujiyay taageero kal iyo laab ah oo ay u hayaan dowlada kMG ah.
Alfred Mutue Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibada Kenya ayaa faah faahiyay waxyaabaha ay Kenya ku diiday in ciidan loo diro Somaliya wuxuna sheegay in amaanka Kenya uu khatar wajahi karo hadii dowlada Kenya fara geliso dalka Somaliya oo uu sheegay in uu yahay meel qasan.
“DKMG ah saaxibo ayaan nahay laakin nooma qorshaysna in aan ciidan dirno oo ay inta xadka ka talaabaan Muqdisho gaaraan, amaanka dalkeena ayaan ilaalinaynaa marnaba fara gelin ciidan kama samaynayno soomaaliya”ayuu yiri Alfred Mutue .
21-kii Bishan Maarso ayuu Shariif Sheykh Axmed Warqad codsi ah u gudbiyay Mwai Kibaabki taas oo uu ku dalbanayay in Kenya soo wareejiso malafka 2500 Askari oo dhawaan gudaha Kenya loogu tababaray DKMG ah.
Kenya waxay rumaysantahay in hadii ay ciidan ugu yaboohdo DkMG ah noqon doonto sida Pakistan oo kale islamarkaana magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi noqon doonaan meelo qaraxyo hareeyaan waxayna sidaasi Kenya ku weyn doontaa malaayiin Dollar oo sanad waliba kasoo gala Dalxiiska.
Waa Sharaf dil lasoo gudboonaaday DKMG ah oo inta Ciidan Soomaali ah loo tababaray hadana loo diiday taas oo muujinaysa in waxa loogu yeero beesha caalamka ay gumaystaan Madaxda DKMG ah.
« Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Dagaal kula wareegay gacan ku haynta degmada Shibis oo ay horay u joogeen Maleeshiyaadka Xukuumada Ridada. Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. »